Indlu epholileyo, apho ixesha liyeka - I-Airbnb
Indlu epholileyo, apho ixesha liyeka
The Summit, Queensland, Australia
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguHelen
Indawo yethu eStanthorpe iyafumaneka ngoLwesine ukuya kwiLanga ebusuku ukuba unezicelo ezikhethekileyo zezinye iintsuku nceda uqhagamshelane nam. Indlu yangasese inamagumbi amabini okulala kunye nedesika enkulu, kude nendlu enkulu yabucala, sisiphelo esiphezulu seNgqungquthela. Iimbono zinde, indawo inamanzi aseNtwasahlobo. Siyimizuzu eyi-8 kuphela ukusuka kumbindi wedolophu. Sinezinja ezimbini eziqeqeshwe kakuhle, ezinathi ngamaxesha onke .Singakwazi ukuhlalisa abantwana bakho ndicela ujonge nam kuqala. Qaphela amanzi avulekileyo kufuphi ne-cottage.
Kukho abantu abaninzi abeza eStanthorpe ukuze babone inkwenkwezi, sinesibhakabhaka esimangalisayo sasebusuku kuba indlu yethu esemaphandleni ikwisiphelo esiphakamileyo xa ubona isibhakabhaka esineenkwenkwezi zobusuku kunye neetshona zangokuhlwa eziza kuthatha umoya wakho, igolide kunye nebomvu kuyo yonke indawo, kukho umlilo phandle, apha endlini sineentaka ezintle ezibakho iintsuku eziyi-20, iintaka ezintle ze-satin Bower, inkosi parrots, kunye neentaka zethu zosapho ezonwabisayo, ukuzitsho nje ezimbalwa. Sinemithi emincinci yeziqhamo ezindala ezahlukahlukeneyo ezahlukahlukeneyo umyeni wam uLen ebisoloko eqokelela aze ayibone kangangeminyaka emininzi indlela yokuphila ephilayo njengoko ndibethwa ngumoya, ibhotile kunye nokwenza iziqhamo ukuze sizisebenzise, senza eyethu iminquma, amaxesha amaninzi kukho iindidi zemveliso yethu esemaphandleni oza kuyizama. Ndine-studio esincinci sobugcisa kunye nemigqomo eyenziwe ekhaya njl esithengiswayo ecaleni kwendlu enkulu owamkelekile ukuyibona. Indlu esemaphandleni inazo zonke izinto zebhedi, iitawuli ezicocekileyo, ishampu nezinye izinto, isepha yezandla, ihlamba umzimba, iti, ikofu ecocekileyo, nayo yonke into endinokuyicinga ukuze uhlale kamnandi kangangoko kunokwenzeka. Okuphela kwecala elisezantsi kukuba asinayo i-WiFi. Indlu yethu esemaphandleni ayinanto yakwenza netekhnoloji yale mihla ibe yindawo ekuyo imalunga nokuchitha ixesha ucinga ngendalo. Sinomatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu kwigumbi lokuphumla nakwindawo yekhitshi. Ayikho kumagumbi okulala aneefeni zesilingi
Yindawo efama enezixhobo nabamelwane abanezilwanyana zasefama. Sonke sithathe umhlala-phantsi, ndingumpheki nomzobi. Le ndlu inedama elisentwasahlobo, kunye neetanki zamanzi emvula, sinezinto zamanzi ezaneleyo kwanakwimeko eyomileyo, iigadi zigcinwe kakuhle ibe zinamanzi aqhelekileyo nangona ngamanye amaxesha icala lelizwe linokomiswa. Sinepaki yesizwe emangalisayo malunga nemizuzu eyi-20 ukusuka kwindlu esemaphandleni ngemoto, kunye nezinye zezona ndawo zamatye zintle eOstreliya, kukho neentlobo ezininzi zokuhamba ngeenyawo epakini. Sinembali entle kwidolophu yethu yabantu abaye bahlala apha emva kwemfazwe. Idolophu yethu inomlambo omhle ohamba ngobude bedolophu kunye neendlela zokuhamba ezilula kakhulu ezinendawo eninzi kunye nemithi yokonwabela ipikniki, iyatshintsha kunye nexesha lonyaka Ikwindla kunye nentwasahlobo endiyithandayo. Le ndawo yaziwa ngezinye zewayini ephumeleleyo eOstreliya, iwayini yeNgqungquthela ingaphantsi kwemizuzu eyi-3 ngemoto ukusuka kuthi. IStanthorpe inomzila wewayini weentaka ze-Strange ngento eyahlukileyo. Ngenxa yokuba singumhlaba ophakamileyo okhethekileyo eQueensland, yindawo enkulu yeziqhamo nemifuno kwiimarike zasekuhlaleni nezamanye amazwe kunye nezinye iindawo zewayini eziyi-40 nangaphezulu, Indlu esemaphandleni ekwindawo ethi `The Summit' inevenkile yasekuhlaleni evula iintsuku eziyi-7 ngeveki kunye neofisi yeposi, ipetroli kunye nezinto zokutya. Idama elikhulu lesiphango, idama laseWarwick Leslie kunye nedama laseGlen Lyon ngaphaya nje komda e-NSW kukho izinto ezonwabisayo zokuloba. Imozulu elapha ingabanda kakhulu ebusika kodwa indlu yethu esemaphandleni igcwele zizinto ezifudumeleyo, ineengubo ezimfumamfuma, i-thermostat oil heater ehlala kuyo ebusika ngoko usoloko unendawo efudumeleyo yokufika ekhaya ukuze uphendule umoya ukuba kuyimfuneko kunye nomlilo wangaphandle ukuze wonwabele zonke iinkuni ezikhoyo, Singathanda ukuba uze kuhlala kwindawo yethu ekhethekileyo.
4.98 · Izimvo eziyi-91
Sijikelezwe yifama yayo enoxolo kakhulu, inani elimangalisayo leentaka ezahlukeneyo ezihlala kwindawo leyo, umgangatho omkhulu ugqunyiwe, unezihlalo ezininzi zokuphumla kunye netafile engaphandle, inkuni yomlilo engaphandle ibonelelwe ngemozulu. kuphela 8 mins ukusuka kumbindi wedolophu. abantu abaninzi beza e-Stanthorpe ngenxa yeewayini zayo kodwa kwakhona ukujonga ukubunjwa kwamatye okumangalisayo afumaneka kwipaki yethu yeSizwe kunye neendawo ezingqongileyo, sisiqingatha seyure ukusuka eWarwick kunye nemizuzu engama-40 ukusuka eTenterfield NSW , abantu beza rhoqo ukujonga isibhakabhaka ebusuku i-cottage yethu iyamangalisa ngakumbi kwiinyanga ezimnyama, sinegaraji egqunyiweyo yemoto yakho. Olunye undwendwe luzise iibhayisekile zokutyhala iStanthorpe ineendlela ezininzi zebhayisekile. kukho ukhenketho lwebhayisekile ekhokelwayo , ivenkile yethu yasekhaya kwi-summit ineofisi yeposi, i-fuel kunye nentaphane yezinto zokutya ezifumaneka kumaphephandaba kunye nolwazi lwendawo i-cottage iphinde ibonelele ngolwazi oluninzi kwindawo yethu.. iindwendwe ziye zakhwela iibhayisikili ukuya kwindawo yendawo. bagcine ukufumana oko bakufunayo. Kukho indawo emfutshane yendlela emdaka ukuya kwindawo yethu.
Hi, I am a chef, artist and a small business owner, I have been working with the public for some 30 years , having owned and operated 9 business down on the Gold coast with my husband Len. Then we moved to the Granite Belt in 2001 for a tree change and have never looked back , Currently we run this Air bnb from the property, we both love engaging with people, I love all artistic ventures , and Len grows and grafts old variety fruit trees and tends all the gardens we have two rescue dogs and we both love nature.
Hi, I am a chef, artist and a small business owner, I have been working with the public for some 30 years , having owned and operated 9 business down on the Gold coast with my h…
sihlala sifumaneka kwiindwendwe kwaye ndihlala ndifumaneka ngeMobil ifowuni ukuba ufuna nantoni na kodwa sithanda ukunika iindwendwe ubumfihlo ngoko kuya kuba kwiindwendwe ngamnye ukuba zikhetha ukunxibelelana nathi. I cottage ina 2 bedrooms, enye ine king bed enye incinci, inokwenziwa ibeyi 2 singles okanye i king ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho, igumbi lesibini elincinci liphantsi ngeholo encinci line curtain eshinyeneyo ngaphambili. yepaseji encinci enika indawo yesibini ubuninzi babucala. Igumbi lokuphumla kunye nekhitshi yiplani evulekileyo, kude namagumbi okulala ngepaseji ende. Onke amagumbi ajonge kwimibono yecala ledolophu.
sihlala sifumaneka kwiindwendwe kwaye ndihlala ndifumaneka ngeMobil ifowuni ukuba ufuna nantoni na kodwa sithanda ukunika iindwendwe ubumfihlo ngoko kuya kuba kwiindwendwe ngamnye…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- The Summit